अध्याय ५३ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सुरुआत म नै हुँ, र अन्त्य म नै हुँ। म पुनरुत्थान भएको र पूर्ण एक मात्र साँचो परमेश्‍वर हुँ। म तिमीहरूको अगाडि मेरा वचनहरू बोल्छु, र म जे भन्छु त्यो तिमीहरूले दृढतापूर्वक विश्‍वास गर्नुपर्छ। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानसक्छ, तर मैले भनेको कुराको एउटा अक्षर वा एउटा बिन्दुसमेत बितेर जानेछैन। यो याद राख! यो याद राख! मैले बोलेपछि एउटा शब्द समेत कहिल्यै फिर्ता लिइएको छैन, र प्रत्येक शब्‍द पूरा हुनेछ। अब समय आइपुगेको छ, र तिमीहरू तुरुन्तै वास्तविकतामा प्रवेश गर्नुपर्छ। ज्यादा समय छैन। म मेरा पुत्रहरूलाई महिमित राज्यमा डोर्‍याउनेछु, र तिमीहरूले चाहेको र तृष्णा गरेको कुरा पूरा हुनेछ। मेरा पुत्रहरू हो! छिटो उठ र मलाई पछ्याऊ! तिमीहरू अझै यसमा अलमल्‍ल परिरहने समय छैन। गुमेको समय कहिल्यै फर्केर आउनेछैन; अन्धकारपछि उज्यालो हुनेछ, र उठाई लगिने काम तिमीहरूकै आँखा अगाडि यहीँ छ। के तिमीहरूले बुझ्यौ? तिमीहरूका आँखा खोल! तुरुन्तै बिउँझ! एक-अर्कासँग कुराकानी गर्दा अहिले तिमीहरूलाई फोकटको गफमा भुल्‍न वा मण्डलीको निर्माणको लागि लाभदायक नरहेको कुनै पनि कुराकानी भन्‍न अनुमति छैन। तैँले आफ्‍ना दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूलाई तैँले परमेश्‍वरको अघि कसरी प्रकाश पाइस् र आफैलाई कसरी चिनिस् त्यस सम्‍बन्धी आफ्‍ना व्यावहारिक अनुभवहरू वा त्यसका विवरणहरू प्रदान गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यी कुराहरू प्रदान गर्न सक्‍नेहरूसँग कद हुनेछ! आजभोलि, तिमीहरूमध्ये कति जना अझै भयभीत छैनौ, र मैले जे भने पनि वा मैले जति नै चिन्ता गरे पनि, तँ निडर रहन्छस्; तेरो पुरानो मनुष्यताले आफैलाई अलिकति पनि छुन दिँदैन। त्यसो भए त, त्यसरी नै अघि बढिराख्! को बरबाद हुने रहेछ पर्ख र हेर्! तैँले सधैँ संसारप्रति लालचको विचार राखिरहेको हुन्छस्, सम्पत्तिको लोभ गरिरहेको हुन्छस्, र आफ्‍ना छोरा, छोरी र पतिका निम्ति अत्यन्तै ठूलो घनिष्ठताको अनुभूति गर्छस्। ठीकै छ, तैँले घनिष्ठताको अनुभूति गरिराख्! यो त यस्तो भएको छ मानौं मेरा वचनहरू तिमीहरूका निम्ति सम्‍बोधन गरिएको होइन, र तिमीहरू आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यसरी नै अघि बढिरहन सक्छौ! भविष्यमा चाँडै नै, तिमीहरूले सबै कुरा बुझ्‍नेछौ, तर त्यो बेलासम्‍म अत्यन्तै ढीला भइसकेको हुनेछ। तिमीहरूलाई न्यायले मात्रै पर्खिरहेको हुन्छ।
अघिल्लो: अध्याय ५२
अर्को: अध्याय ५४